सिद्धान्त वा एजेण्डामुखी छैन बरु पैसामुखी छ निर्वाचन : पैसा नभए उम्मेदवारै बन्न गाह्रो, कति छ आयोगले तोकेको खर्च ? | Nepal Ghatana
सिद्धान्त वा एजेण्डामुखी छैन बरु पैसामुखी छ निर्वाचन : पैसा नभए उम्मेदवारै बन्न गाह्रो, कति छ आयोगले तोकेको खर्च ?
प्रकाशित : ७ चैत्र २०७८, सोमबार १४:२३
निर्वाचन कसरी जितिन्छ ? पैसाको बलमा वा एजेन्डाको लोकप्रियताले ? यतिबेला मात्र होइन, प्रायः सधैँ निर्वाचनका बेलामा उठ्ने प्रश्न वा सुरु हुने बहस हो यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका वेला अहिले आम नेपालीले पनि यही प्रश्न गरिरहेका छन् ।